Umtya wokuTywina iTywina eli-10 x, x 50'- 2 ukubala
Iimpawu: 1. Sebenzisa i-Premium PA / PE kunye nezixhobo zobuchwephesha eziphambili. I-PA / PE Izinto zokwenza imveliso: Itekhnoloji yobungqina obuthathu isusela kumaleko ama-5 aqine ukugcinwa koxinzelelo lwexesha elide, umaleko wenayiloni ophakathi (PA) uthintela umoya obandayo kunye namanzi ekungeneni kwingxowa yoxinzelelo. Inayiloni enganyangekiyo yokubhoboza ukubetha 2. Thobela ...
Ukudibanisa ezona mpawu zibalaseleyo zeQuad Seal kunye nePhakamisa ingxowa, iFlat Bottom Bag (ekwabizwa ngokuba yiBhokisi yakutya) inesibheno esishelufu esiphezulu, ngelixa iphakamisa indawo zombini kunye nendawo yokupakisha ngesitayile sebhokisi esezantsi. Flat Ezantsi Bags ukuvumela ukuzaliswa top phezulu kwaye ifanele ezahlukeneyo izicelo zemarike, ukusuka kwaselwandle, ikofu, kunye muesli, ngokusebenzisa ukutya kwezilwanyana kunye nemveliso horticulture. Iimpawu zeFlat Bottom Bag Ezomeleleyo zokulaminetha zibonelela ngqongqo olulungileyo lokuzimela ngokugqibeleleyo ...
Ukudibanisa ezona mpawu zibalaseleyo zeQuad Seal kunye nePhakamisa ingxowa, iFlat Bottom Bag (ekwabizwa ngokuba yiBhokisi yakutya) inesibheno esishelufu esiphezulu, ngelixa iphakamisa indawo zombini kunye nendawo yokupakisha ngesitayile sebhokisi esezantsi. Flat Ezantsi Bags ukuvumela ukuzaliswa top phezulu kwaye ifanele ezahlukeneyo izicelo zemarike, ukusuka kwaselwandle, ikofu, kunye muesli, ngokusebenzisa ukutya kwezilwanyana kunye nemveliso horticulture. Iimpawu zeFlat engezantsi kunye neBhokisi yokuma ePhakamile yokuqina kwe-lamination eyomeleleyo ibonelela ngoyena ndoqo wokugqibelela ...
Ukudibanisa ezona mpawu zibalaseleyo zeQuad Seal kunye nePhakamisa isingxobo, I-Kraft Paper Flat Bottom Bag (ekwabizwa ngokuba yiBhokisi yakutya) inesibheno esishelufayo, ngelixa isenza nkulu ishelufu kunye nendawo yokupakisha ngesitayile sebhokisi esezantsi. Flat Ezantsi Bags ukuvumela ukuzaliswa top phezulu kwaye ifanele ezahlukeneyo izicelo zemarike, ukusuka kwaselwandle, ikofu, kunye muesli, ngokusebenzisa ukutya kwezilwanyana kunye nemveliso horticulture. Iimpawu zePlastiki yePlati yeFlathi esezantsi kwiBhegi eyomeleleyo yokuqaqanjelwa inikezela ngqongqo olufanelekileyo ...
I-HONGBANG isasaze umgangatho ophezulu oshicilelweyo weemveliso zefilimu kubathengi baseYurophu naseMelika ngaphezulu kweminyaka engama-20. Inika iintlobo ngeentlobo ezahlukeneyo zothintelo lweplastiki elaminethiweyo ifilimu. Uninzi lweemveliso zefilimu zisetyenziselwa ukufakelwa kokutya kwaye ezinye ziya kwizicelo ezizodwa. Sibonelela ngezisombululo zoluhlu lwasendle lwezicelo zemiboniso bhanyabhanya. Inani lolungelelwaniso olunokwenzeka kwifilimu yethu yomaleko omninzi alunasiphelo. Nokuba ...
Ukuprintwa okuPhezulu kwePlastiki yePlastikhi yokuPakisha ngokuzenzekelayo
Ukupakisha imaski ebusweni
Kule mihla, ukunciphisa iintsholongwane kuyeyona nto ibaluleke kakhulu, ke umzi-mveliso wethu ujoyine emfazweni nehlabathi. Sibonelela ngesigqubuthelo sobuso bokupakisha iingxowa zeplastiki ezineelogo, ezikhusela iimaski zobuso bakho kuwo wonke umonakalo onokubakho kwaye zongeze ixesha lokuzigcina. Iingxowa zeplastiki zineziphu okanye iteyiphu yokuncamathela ephezulu. Oku kwenza iimaski zobuso zibe lula ngakumbi kwaye zisebenziseke lula. Ipakethi ibandakanya i-1-20 okanye ngaphezulu iimaski zobuso. Sivelisa ibhegi yokupakisha yemaski kunye ne-re ...
Ikholamu yomoya esetyenziselwa ukusetyenziswa kweMveliso eQhelekileyo kunye nokwenza umonakalo simahlaUbubanzi obuqhelekileyo bomqulu womoya oyi-2 cm, 3 cm Ububanzi bekholamu yomoya, baneziphumo ezingcono zokukhusela. Kodwa eyona isetyenziswa ngokuxhaphakileyo bubude bekholamu ezi-3 cm. Ukutyeba kune-7um, ukujiya okuqinileyo kunokukhusela okungcono. Ukuba ufuna ulwenziwo, nceda uqhagamshelane nathi ukuze sixoxe. Ikwanokukrazuka okanye ukunqunyulwa, ukuthanda ukupakisha iimpahla ezisengozini, ezinje ngobugcisa beglasi, ukuhanjiswa okucacileyo, iwayini ebomvu, i-porcelain, izixhobo ezichanekileyo, njl.
I-Kraft Paper Yima iNgxowa
Indawo yokuma kwephepha yakutya iphepha lokuma ngephakethi yeyona ndlela ithandwayo kakhulu yokupakisha kwintengiso kuba le ndlela yokupakisha iyasebenza kwaye iyasebenza kwaye inomtsalane. Njengoko igama ngokwalo libonisa, ezi ngxowa ziyakwazi ukuma kuyo yonke indawo enzima. Inesakhono esishelufini sokubonisa kwaye banokunciphisa iimfuno zokugcina kunye nokwandisa indawo yeshelufu. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu i-snack, i-condiment, ubucwebe, iti okanye ukupakisha ikofu. Iipropati stand up yakutya ...
Ibhegi ukutya Pet
Isingxobo seplastikhi sokuphakama yeyona ndlela ithandwayo kakhulu yokupakisha kwintengiso kuba le ndlela yokupakisha iyahluka kwaye iyasebenza kwaye inomtsalane. Njengoko igama ngokwalo libonisa, ezi ngxowa ziyakwazi ukuma kuyo yonke indawo enzima. Inesakhono esishelufini sokubonisa kwaye banokunciphisa iimfuno zokugcina kunye nokwandisa indawo yeshelufu. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu ukutya okulula, into yokutya, ubucwebe, iti okanye ikofu, ukutya kweNja, ukupakishwa kokutya kwezilwanyana. Iimpawu zokupakishwa kokutya kwezilwanyana ...
Izixhobo zefowuni eziphathwayo
Yima ibhegi yokutshixa yeyona ndlela ithandwayo kakhulu yokupakisha kwintengiso kuba le ndlela yokupakisha iyahluka kwaye iyasebenza kwaye inomtsalane. Njengoko igama ngokwalo libonisa, ezi ngxowa ziyakwazi ukuma kuyo yonke indawo enzima. Inesakhono esishelufini sokubonisa kwaye banokunciphisa iimfuno zokugcina kunye nokwandisa indawo yeshelufu. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu ukutya okulula, into yokutya, ubucwebe, iti okanye ikofu, ukutya kweNja, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, kunye nezinto zokupakisha zefowuni. Ifanelekileyo ...
Ingxowa yespout yindlela entsha yokupakisha uyilo oluthile lweemveliso ezisekwe kulwelo.Isizathu sokuqatshelwa kwezi ngxowa zikhutshiwe kuyilo olusebenzayo lomsebenzisi olungele ukugcina ulwelo, ipasti okanye izinto ezikhululekileyo . Ngaphandle koko, xa kuthelekiswa ne-PET eqhelekileyo okanye iibhotile zeglasi, iipokotho ezinamanzi zilula ukuthuthwa kwaye zigqibelele iishelufu zokuthengisa.Sebenzisa ikakhulu iimveliso ezinje ngokuhlamba isikhululo sepetroli, ijeli yosana, ulwelo f ...